Farira Zvinhu Zvokuita muVancouver Washington
Iri pedyo nechokumaodzanyemba kweKigidhi River, Vancouver, Washington, iri, chaizvoizvo, yeVancouver yepakutanga. Akagara muna 1824 senzvimbo yekutengesa furto, Fort Vancouver yakanga yakabatanidzwa pamwe chete neUnited States neBritain. Apo Oregon Territory yakaiswa chete pasi pekutonga kweUnited States muna 1846, zvivako zvemauto zveAmerica zvakakurumidza kusimbiswa. Zvizhinji zvezvakanakisa zveguta racho zvinotarisa munhoroondo yaro yakawanda. Iri pedyo nechokuchamhembe kweColumbia River Gorge, Vancouver yakakomberedzwa nenzvimbo inoshamisa, ine maonero eGomo Hood uye Mount St. Helens mumazuva akajeka. Pfuma yekunze yekunze inogona kuwanika mukati meguta uyewo pedyo nemapaki enyika uye masango enyika. Nhoroondo yeVancouver inonakidza nekunaka kwepanyama inobatanidza kuita kuti ive nzvimbo inonakidza yekushanyira nekuongorora.
Heano mhando dzepamusoro dzezvinhu zvinonakidza kuona nekuita mukati nepamusoro peVancouver, Washington.
Fort Vancouver National Historic Site. Angela M. Brown
Nzvimbo yeHome Vancouver National Historic Site inopinda maekala anopfuura 190, ine zvikwata zviviri, chikuru kwazvo chiri muVancouver. Kana iwe uchifarira nheyo dzakasiyana-siyana, iyo inobva kuNative American kugadzirisa kusvika kune fur fur trading post kusvika kunzvimbo yehondo, tanga kushanya kwako kuVancouver National Historic Reserve Visitor's Center, apo maitiro ekududzira, firimu, uye vashandi vachapa Pfupiso yezvose zvaunogona kuona nekudzidza. Sezvaunenge uchidzungaira wakaoma iwe uchasangana nemisha yemapurisa epamusoro uye imba yekuvakwa, zviyeuchidzo zvehondo, uye nzvimbo dzepaki. Nhare yakagadziriswa, yakazadzwa nebhasi, imba yaMambo Factor, uye dhizha rekuchera, rinonyengera kumaodzanyemba kwezvakaoma. The McLoughlin House unit ye ​​Fort Vancouver National Historic Site iri mhiri korwizi muPortland.
Nzvimbo yeHome Vancouver National Historic Site, iyo Pearson Air Museum inogara mune imwe hanger yakaitika, yakavakwa muna 1918 yeArmed Spruce Production Division inotsigira basa reHondo Yenyika I-uye yekuvaka zvikepe. Nhasi nzvimbo iyi inotarisa mberi kweHondo-World-War-II nguva ndege. Panguva yekushanya kwako, uchaona ndege dzepamusoro uye zvigadzirwa zvepa Pearson zvakagadziriswa zvekusingaperi pamwe nekuchinja maonesheni. Zviitiko zvakakosha uye kuratidzwa kwemhepo kunowanikwa gore rose.
Vancouver Land Bridge. Angela M. Brown
Yakavakwa sechikamu cheMaya Lin's Confluence Project, Vancouver Land Bridge inorangarira kushanya kwaLee naClark 1805 nezvimwe zvakawanda. Iyo yakawanda-inofamba-bridge inofamba inofamba pamusoro penyika State Highway 14, ichiita kuti vafambisi nevatambi vaende pakati pe Fort Fortancouver National Historic Site uye Columbia River. Ikudyara pedyo neBhiriji kune zvizvarwa zvepanyama zvakadai semapapu ebhuruu uye maples mapavi. Zviteshi zvitsanangudzo zvinopa ruzivo pamusoro pevanhu vechiKinook, Lewis naClark uye Corps of Discover, nhoroondo yekwavo, nezvimwewo.
Vatambi uye mabhasiki vanofarira mitemo yakawanda yemigwagwa yakawanikwa muVancouver. Vakawanda vanomhanya pedyo neColumbia River. Heano muenzaniso:
Discovery Historic Loop Trail - tevera iyi nzira ine makiromita uye iwe uchayambuka nzira nevakawanda vezvinhu zvakanakisa zveVancouver nezvimwe zvinofadza
Burnt Bridge Creek Trail - inomhanya kwemakiromita masere kusvika mumoyo weguta, kubva kuVancouver Lake kusvika kuMeadowbrook Marsh Park
Columbia River Renaissance Trail - iyi nzira inofananidzwa neColumbia River kumabvazuva kweI-5
Salmon Creek Trail - inomhanya kubva kuSalmon Creek Park matongo akare uye nzvimbo yemvura
Iyi Water Resources Education Centre inopa zviitiko zvakasiyana-siyana zvinonakidza zvichange zvichitsvaga kumakore ese. Ngarava yemasikirwo ehupenyu inofara ichafara kushanyira maitiro avo akanaka uye anodzidzisa munda. Vana vaduku vanogona kutamba uye vanodzidza mumatombo Mavara, nzvimbo inobatanidza-nzvimbo yavo. Munhu wose achawana chimwe chinhu chinonakidza pakati pezviratidzwa zveCentral, mahofisi emagetsi, uye masango akachengetedzwa akachengetedza. The Water Resources Education Centre iri pedyo neColumbia River Renaissance Trail. Gadzira kushanyira pakati nepano kufamba kwemvura - zvose zviri pachena.
Nhoroondo yeEsther Short Park yakave ichikwira uye ichidzika pamusoro pemakore; kugadziridza kwekuvandudzwa kwave kuchiriita kuti ive nzvimbo inofadza uye yakakurumbira munharaunda. Zvivako zvePaki zvinosanganisira bandstand / pavilion, gazebo inofadza, munda webindu, nzvimbo yekutamba, uye nzvimbo yechitamba yemvura, pakati pegwenzi rakasvibirira uye nzira dzinofamba dzinofamba. Paki ndiyo inonyanya kukosha ndeye Salmon Run Bell Bell. Nguva imwe neimwe maawa masikati nemasikati, shongwe 69-foot inoratidza diorama kugovera nhau yeCinook nhau pamwe nemabhero uye glockenspiel. Vancouver Farmer's Market, yakabata musi weMugovera uye Svondo mutambo nekuputsika, inoitika pamwe naEsther Short Street, iyo inopinda nepaki. Munguva yezhizha, paki inopa hurukuro uye mafirimu.
Nhoroondo yemunharaunda ndiyo inotarisirwa kuClark County Historical Museum, iri mubazi rekare reVancouver Public Library. Museum inoratidzira inoshandura nguva dzose uye inobvisa zvinhu zvose kubva pamitambo yezvigadzirwa, kutakura uye mapepa, kune tsika yakakurumbira.
Special Events & Festivals muVancouver
Pane zviitiko zvinofadza zvinokonzera vashanyi kuVancouver gore rese, kusanganisira:
Zuva Rokuzvimirira paVancouver (July)
Farira Zvinhu Zvokuita Pedyo neVancouver
Pendleton Woolen Mills muna Washougal, Wash. Angela M. Brown
Izvi zvinofadza zvinowanikwa mukati mechiteshi chiduku kubva kuVancouver.
Pendleton Woolen Mills - vhiki yezuva yeeverin mill tours inowanikwa kubva ku Mill Mill muWashougal
Cedar Creek Grist Mill - inoshandiswa, inogadziriswa nemvura inogadzira grist inzvimbo inonakidza uye yakaisvonaka
Ridgefield National Wildlife Refuge - zvisikwa zvakasiyana-siyana zveizvi zvichengeta zvinopa shiri dzakanaka nemhuka dzesango kutarisa mikana
Cathapolte Plankhouse - iyi yakazara yeCinook plankhouse inogadzira mapurogiramu nemasangano kusvikira pagore uye inoshanda senzvimbo inoshandura ye Ridgefield National Wildlife Refuge
Suncadia Resort ku Cle Elum, Washington
Gomo re St. Helens: A Personal Account
Kuwana Kugadziriswa Kwemotokari kuWashington State
10 Zvinhu Zvinogona Kuvandudza Kufamba Kwemhepo
The 8 Best Best New York City Hotels of 2018
4 yeNYC's Most Haunted Bars
Tarisa ku Las Ventanas al Paraiso, A Rosewood Resort ku Los Cabos
New Mexico State Fair ine Inwa Yayo
10 Zvinhu Zvaunofanira Kuita muMilwaukee kweChechi Dhora 10
Crystal City Shops: Great Shopping uye Dining Venues
Zvokudya Zvakanakisisa neBhari Pedyo neT Turner Field
Zvipatara nemakiriniki muBali, Indonesia
Kusvika Pakuziva Dilworth
Nzvimbo Dzakanaka Kupfuura Nechiwi muGreece